‘१५औं वार्षिक वाइवाइ राष्ट्रिय शिक्षा अवार्ड २०७६’ - Everest Dainik - News from Nepal
‘१५औं वार्षिक वाइवाइ राष्ट्रिय शिक्षा अवार्ड २०७६’
काठमाडौं, साउन ६ । शिक्षालय मासिकको प्रस्तुतिमा वार्षिक रुपमा गरिदैं आएको कार्यक्रम नेशनल एजुकेशन अवार्ड यसवर्ष १५औं संस्करणमा प्रवेश गरेको छ । विभिन्न आरोह अवरोहहरुलाई संगाल्दै यस कार्यक्रमले पन्ध्रौं संस्करणको यात्रा तय गरेको हो ।
यस वर्षको अवार्ड कार्यक्रममा माध्यमिक तथा उच्च शिक्षा प्रदान गर्ने शिक्षालयहरु, शिक्षा सेवामा कार्यरत कर्मचारी, विभिन्न संघसंस्थामार्फत शिक्षालाई नीतिगत तथा अन्य पक्षबाट पृष्ठपोषण गर्ने ब्यक्तित्व, संघसंस्था तथा शिक्षापत्रकारहरुलाई समेटिएको छ । बार्षिक कार्यक्रमको निरन्तरता स्वरुप यसवर्ष ‘१५औं वार्षिक वाइवाइ राष्ट्रिय शिक्षा अवार्ड २०७६’ जानकारी गराउन पाउँदा हामी अत्यन्त गौरवान्वित भएका छौ । शिक्षा क्षेत्रमा एउटा विशिष्ट पहिचान बनाइसकेको यस कार्यक्रमले यस वर्ष पनि राम्रो छाप छोड्नेमा हाम्री आशावादी छौं ।
यसवर्ष नेशनल एजुकेशन अवार्डमा समावेश गरिएका विधाहरु यस प्रकार रहेका छन् ।
१) स्कुल अफ दि इयर (सामुदायिक÷संस्थागत विद्यालय)
२) एक्सिलेन्स अवार्ड (११।१२ सहितको विद्यालय)
३) बेष्ट टिचर अवार्ड (सामुदायिक विद्यालय)
४) गुडविल एचिभमेन्ट अवार्ड (विद्यालय वा कलेज)
५) कन्ट्रिब्यूसन अवार्ड (शैक्षिक संघसंस्था, संगठन)
६) डेडिकेशन अवार्ड (शिक्षा सेवा)
७) क्रिएटिभ अवार्ड (व्यक्ति वा संस्था)
८) एजुकेशन जर्नालिष्ट अवार्ड
९) प्रिन्सिपल अफ दि इयर
१०) राइजिङ अवार्ड (विद्यालय वा कलेज)
११) एजुकेशन भिजन अवार्ड
१२) लाइफटाइम एचिभमेन्ट अवार्ड
१३) वाइ वाइ ज्ञानउदय छात्रबृत्ति पुरस्कार
कार्यक्रममा २ जना क्रियाशिल शिक्षा पत्रकारहरुलाई पनि नगद राशी रु. १० हजार सहित पुरस्कार प्रदान गरिनेछ । यसैगरि वाइवाइका तर्फबाट ज्ञानउदय छात्रबृत्ति पुरस्कार सामुदायिक विद्यालयको विद्यार्थीलाई रु. २५ नगद राशी प्रदान गरिनेछ।
विगतका बर्षहरु झै यस बर्ष पनि शैक्षिक क्षेत्रको उत्सव, उत्सव होइन महोत्सब भन्ने नाराका साथ यस कार्यक्रम सम्पन्न गर्ने प्रयासमा हामी छौं । सबै विधाअनुसारका शैक्षिक विशेषज्ञ, विश्लेषक, शैक्षिक नेतृत्वकर्ता, शिक्षा पत्रकार तथा शिक्षा क्षेत्रमा योगदान पुर्याउनुभएका ब्यक्तित्वहरुलाई समेटेर निर्णायक समिति गठन गरिएको छ ।
निर्णायक समितिको नाम पुरस्कार वितरण कार्यक्रममा घोषणा गरिनेछ । यो कार्यक्रम शिक्षा क्षेत्रको नै विशिष्ट कार्यक्रम भएकाले सम्पूर्ण सरोकारवाला पक्षसँग सहकार्य, समन्वय, सल्लाह र सुझावको समेत अपेक्षा गर्दछौं । कार्यक्रमको पुरस्कार वितरण कार्यक्रम २०७६ श्रावण २७ गते सोमबार काठमाडौंका रसियन कल्चर सेन्टर, कमलपोखरीमा दिउँसो १ः०० बजे भब्य समारोहका विच गरिने छ ।